भाषण हैन काम गरेर देखाउँछु – Janacharcha.com
» अन्तर्वार्ता अंक: 920
भाषण हैन काम गरेर देखाउँछु
नँया बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघका अध्ययक्षसँगको बहस
Janacharcha.com शनिबार, भाद्र २१, २०७६ मा प्रकाशित
२०६२ सालमा स्थापना भएको नँया बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघले हालसालै नयाँ नेतृत्व पाएको छ । जसमा रामशरण गिरी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । आज हामीले अध्ययक्ष गिरी सँग समग्र बानेश्वरको व्यवसायीक हालखबर सोधेका छौं ।
संचारकर्मी बटुकराज गिरी र अध्यक्ष राम शरण गिरी बिच भएको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै :
बटुक गिरी, प्रश्नकर्ता
हालै नँया बनेश्वरका लागी निर्वाचित हुनु भएको छ । कस्तो पाउनु भयो त यँहाको व्यवसायीक माहोल ?
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० र ३१ मा रहेको नँया बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघको कार्यक्षेत्र विधानतहः पुरानो बानेश्वरदेखि शंखमुलसम्म पर्दछ । यस क्षेत्रमा व्यापार व्यासायीको अनेकौ समस्याहरु छन् , जसलाई राज्यले सम्बोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको अहिले घर बहाल (सटर भाडा) हो । घर बाहलमा घरबेटिको मनपरी हुन्छ । व्यवसायीको लाखौं करोडौं रुपैयाँ घरधनीको कोठामा लागेको हुन्छ त्यही भएर झटै सटर छोडेर पनि जान सकिन्दैन् । अखिरमा व्यावसायीले नै कम्परमाईज गर्नुपर्ने हुन्छ ,जति भाडा माग्यो त्यति दिनै पर्यो ।
सटर भाडाको विषयमा कुनै सरकारी मापदण्ड छैन् ?
सरकारको मापदण्ड अनुसार नँया बानेश्वरमा एउटा सटरवाट बढीमा ६ हजार मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । तर घरघनीहरुको एकाधिकारका कारण व्यापारीसँग घरभाडा ठटाएर लिने गरिएको छ ।
१ लाखभन्दा मुनिको सटर त पाउनै ग्राहो छ, १ लाखदेखि २० लाखसम्म पैसा तिरेर यस क्षेत्रमा व्यापारीहरु व्यापार गरिरहेका छन् ।
तपाईको संघको भुमिका खोई त ? संघले पनि त घर धनिको कठालो समाउन सक्नु पर्यो नि त ।
हैन, हामीले कति ठाँउमा समाएका पनि छौं । हामीले भनीरहेका छौं यो बाहल चै अत्याचार नै भयो । राज्यले शुरुमा सिस्टम बसाउनु पर्यो । बनेको नियमहरुलाइ राज्यले कार्यन्यनमा ल्याउनु पर्यो । हाम्रो काम त घचघचकाउने र व्यापारीको पक्षबाट वकालत गर्ने हो । कसैसँग हामीले कुस्ती खेल्न सक्दैनौं, राज्यले बनाएको नियम कार्यन्यवन गराउनु पनि त राज्यकै दायित्व हो नि । हामी स्थानीय सरकार तथा अन्य सरोकारवाला पक्षलाई यस विषयमा घचघचाई रहेका छौं । तर अहिले सम्म नँया बानेश्वर क्षेत्रमा राज्यको नियम लागु हुन सकेको छैन ।
मापदण्ड अनुसार बानेश्वरमा अब पनि ६ हजारमा सटर पाइन्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्छ र अध्यक्ष ज्यू ?
हामीले त्यो दावी गरिरहेका छैनौं , हाम्रो भनाई भाडा दर वैज्ञानिक हुनुपर्छ भन्ने हो । एउटा क्राईट एरिया तोकिनु पर्यो, व्यावसायीलाई पनि असर नपर्ने गरी र घरधनीलाई पनि असर नपर्ने गरी सरकारले एउटा बहाल तोकी दिनु पर्यो । जबो १० स्कावर फुट क्षेत्रफल भएको घरभाडा १ लाखभन्दा बढी माग्छन् । र घरधनीले मनपरी वर्षेनी दुई तिन पटक सम्म घरभडा बढाईदिने समेत गर्छन् । सम्झौता गर्नु भन्यो भने सटर खाली गरि दे भन्छन् । के यो मनपरी है न । राज्यले यस विषयमा गम्भीर हुनु पर्दैन ?
मुलुकको नीति बनाउने र देश लाई मार्गदर्शन गराउने प्रतिनिधि सभाको भवन यहीं आसपासमै छ, सभासदहरु यता उता गरिरहेका हुन्छन् । व्यापारीहरु पुर्पुरोमा हात हालेर टुहुरा जस्तो बनी बसिरहेका हुन्छन् तर उनीहरुलाई मत्लब छैन् । त्यही छेउमै भएका आम नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न नसक्नेले देशको समस्या समाधान गर्छु भन्दै हिडेका छन् हा….हा….हा…… ।
बानेश्वरमा कस्ता कस्ता व्यवसायहरु छन् ? अन्य समस्या के छ ?
नुन देखि सुनसम्म सवै कुरा छ । अहिले हामीलाई राज्यले नक्कली सामान बेच्ने व्यापारीको दर्जा दिएको छ । अब हामीले ब्राण्डको कपी आईटम समेत बेच्न नपाउने भएका छौं । एडिडास,नाईकका जस्ता ब्राण्डको कपी समान यहाँ हामी बेच्ने गर्थियौं । अब त्यो गर्न नपाईने रे । ब्राण्ड कपी भएका जुत्ता यहाँ १ हजार रुपैयाँ हामीलाई खरिद पथ्र्यो हामी त्यही सामान १२, १३ सयमा बेच्थ्यौं । अब त्यस्तो कपी जुत्ताको भन्सार मात्र १५ सय पुर्याई दिएको छ । भन्नुस् अब ३ हजारमा एउटा कपी जुत्ता वा अन्य त्यस्तै सामान कस्ले किन्छ ?
यस व्यवहारले, राज्यले हामी बानेश्वरका व्यापारी चै डुप्लिकेट हो र ब्राण्डेड सामान चाँही दरवार मार्गमा मात्र पाउछ र त्यहीँका व्यापारी चाँही ओर्जीनल हुन् भन्ने जस्तो छाप पारिदिएको छ ।
बानेश्वरको सो रुममा राखिएको सामान डुम्पिलिकेट हुन्छ र त्यही सामान दरवार मार्गको शो रुममा राखियो भने ओरजिनल हुन्छ । उपोभोक्तामा पनि यस्तो खाले छाप परिसकेको छ ।
म ग्यारेन्टिका साथ भन्न सक्छु दरवार मार्गको केहि छिटपुट व्यापारीहरुले बाहेक अरु व्यापारीले पनि हामी जस्तै नै ब्राण्ड कपी नै बच्ने हो । फरक यति यो ग्राहकले त्यहाँका सामान र्ओर्जीनल भन्दै पैसा हाल्छन् र हाम्रो डुप्लिकेटन ठान्दै बारगेनिग गर्छन् ।
पार्किङको समम्या छ ?
छ नि, मान्छेले ५ सयको समान किन्दा १ हजार रुपैयाँ फाईन तिर्नुपर्ने अवस्था छ । पाकिङ गर्ने ठाँउ छैन । ग्राहकले सय रुपैयाँको मोजा किनेर फर्कदा ट्राफिकले १ हजारको चिट तयार पारिरहेको हुन्छ, ग्राहकले झन्झट चाहदैन उसले बरु अन्तै गएर सामान किन्छ , यो पनि एउटा मुख्य समस्या हो ।
यो एउटा महत्वपुर्ण क्षेत्र हो । यँहाबाट देशमा ठुला ठुला परिवर्तन भए तर यँहा भएका व्यवसायका समस्या कहिले परिवर्तन हुन सकेन ।
फुटपाथ व्यवसायहरु पनि नँया बानेश्वर तिर थुप्रै छन् नि ? किन होला फुटपाथमा व्यावसाय गर्नु परेको ?
यो प्रश्न त तपाईहरुले उनीहरुलाई नै गरिदिएको भए हुन्थ्यो । फुटपाथ व्यवसायले सटरवाला पसललाई एकदम असर पुर्याएको छ । न त राज्यलाई कुनै योगदान पुर्रयाएको छ, न त कहि दर्ता छ, न त एक पैशा कर जान्छ , मानिस हिड्ने सडकमा दोकान लगाई दिएर यात्रुलाई दुख दिएको छ । तै पनि यस्तो व्यवसायलाई राज्यले किन सडकमै रहन दिरहेको छ । मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् । उनीहरु राज्यको कुनै अंकुशमा छैनन् । हामी राज्यको हरेक निकायमा दर्ता भएका छौ ।
ठिक छ ,वहाँहरुको पनि व्यवसाय हो । वहाँहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहाना हो , वँहाहरुलाई पनि फुटपाथको वाहेक अन्य खुल्ला ठाँउमा स्थानतरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । तर हैन, वँहाहरुलाइृ भने बानेश्वर र बानेश्वरकै फुटपाथ नै प्यारो छ । एकदम विडम्वना छ, ट्याक्स तिर्ने हामी, भाडा तिर्ने हामी र ग्राहक लाने फुटपाथे व्यावसायीहरु ।
सरकारले के गरी दियोस भन्ने चाहनुहुन्छ ?
भाडाको समस्या सर्वप्रथम सरकारले समाधान गरदियोस् । जब युवाहरु विदेश जानुभन्दा यहीँ लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् त्यो त राज्यको लागी फाईदा हो नी । तर होईन्, एउटा युवाले ५ लाखको व्यापार गर्ने खोज्दा मासिक १ लाख सटर भाडै मागिन्छ छ भने युवा उत्साहित हुन्छन् कि हतोसाहित तपाई आफै भन्नुस् । यो विषयमा मैले हाम्रो महासंघमा पनि कुरा राखिसकेको छु । राज्यले सुन्ने वातावरण महासंघले बनाउनु पर्छ ।
तपाईको कार्यकालमा के के गर्ने विचार छ ?
एक नम्वरमा, संघलाई उर्जा वनाउने छु ।
निस्क्रिय रहेका व्यावसायीलाई सक्रिय बनाउने छु ।
२४ सैं घण्टा व्यावसायी गर्ने वातावरण वनाउने छु ।
फुटपाथ व्यावसायीलाई व्यावस्थित बनाउने छु ।
सदैव व्यवसायीहरुको हक हितका लागि आवाज उठाइ रहने छु ।
फुटपाथ व्यवसायीलाइ कसरी व्यवस्तिथ बनाउनु हुन्छ ?
महानगर भित्र रहेका सरकारी जग्गा पत्ता लगाई हामी स–साना व्यावसायीक केन्द्र बनाउन खोजिरहेका छौ । यो भन्दा अघि पनि फुटपाथ व्यापारीलाई स्थानतरण गर्न प्रयास गरेको हो तर वहाँहरुलाई बनेश्वरको फुटपाथ नै प्यारो छ । अहिले हामी र स्थानीय सरकार बिच यो कुरामा सहकार्य भईरहेको छ, आशा छ चडै नै समास्याको समाधान होला ।
बनेश्वरमा ग्राहक आउने गर्दछन् ,फुटपाथ व्यापारीको लागी पनि बनेश्वर प्यारो हुनु स्वाभाविक होईन र ?
बानेश्वर प्यारो हुनु र बानेश्वरमा व्यापार गर्ने कुरा ठिक हो, सबैले गर्दा हुन्छ । तर नियम कानुन मिचेर, हिड्ने सडकलाई मिचेर व्यापार गर्न पाईदैन् । सटरवाला व्यापारीहरुले सटर भडा तिरेका हुन्छन् ,राज्यलाई कर तिरेका हुन्छन् । र ग्राहक भने सबै फुटपाथमा व्यापार गर्ने लैजान्छ, यस्तो वेथिति त हुनु भएन् नि । उनीहरुले भडा तिर्नु पर्दैन, राज्यलाई कर तिर्नु पर्दैन र उनीहरुले गणुस्थरहिन समान बेच्दा पनि खोजतलाख गर्ने कोहि हुदैन् । यस हिसाबमा हाम्रो सामानको दाम उनीहरुको भन्दा स्वाभाविक रुपमा केही महगो पर्न जान्छ र ग्राहक जहाँ सस्तो पर्छ त्यही जाने हो ।
फुटपाथ व्यापारी सटरमा आउन चाहन्छन् भने हामी स्वागत गर्न तयार छौं । तर अब फुटपाथ र सटरवाला व्यापारी विचको प्रतिस्प्रर्धा मान्य हुँदैन ।
फुटपाथ व्यवसाय गैर कानुनी हो भने कसरी अहिलेसम्म राज्यको आँखा छिचोलेर व्यापार गरिरहेका छन् त ?
यो सबै सेटिङ मिलाउने यँहाका ठुटे नेता हुन् । महानगर भित्रको सडकलाई व्यवस्थित बनाउने काम नगरप्रहरीको हो । तर ठुटे नेता र महानगरपालिकाको प्रहरी विच हुने सेटिङका कारण फुटपाथका व्यापारीहरुले मान्छे हिड्ने सडकलाई दोकान बनाएर बसिरहेका छन् । ठुटे नेतालाई सडक व्यपारीले पैशा बुझाउने गर्छन् र त्यही पैशा ठुटे नेताले आधा आफु राख्छन र आधा प्रहरीलाई बुझाउँछन । यहि लेनदेनका कारण फुटपाथ व्यापारीहरु टिकिरहेका छन् नभए काठमाडौंको बानेश्वर जस्तो ठाँउमा राज्यको आँखा छिचोलेर व्यापार गर्न संभव छ र ?तपाई अफै विचार गर्नुस् न ।
काेराेनालाई जितेर घर फर्किए विराटनगरका सुजन ( भिडियाे अन्तर्वार्ता )
कर्जामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज उपयुक्त हुदैन